ओली–प्रचण्डलाई चन्दकाे अपील
–हरि चन्द, काठमाडौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यु, तपाइर्‌ंहरुलाई थाहा छ, कि संसारभरबाट नेपालको दुई–तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई हेरिराखिएको छ । कति मित्र राष्ट्रहरु यो सरकारको सफलता चाहन्छन्, कति मित्र राष्ट्रहरु यो सरकारलाई ढलेको हेर्न चाहन्छन् । नेपालमा प्रतिपक्ष कमजोर जस्तो देखिएला तर त्यस्तो कदापी हैन । संसदको प्रतिपक्ष ठूलो नदेखिएला तर बहु–पात्रहरुलाई एक ठाउँमा जम्मा पारेर लुकाइएको प्रतिपक्ष खतरनाक छ ।
सरकारको बिरोधका स्वरहरु बढ्दै गएका छन् । सरकारको बिरोध गर्नेहरु जतिको नाम संकलन गर्नुहोस् र बालुवाटारमा सम्मान कार्यक्रम राख्नुहोस् किनकी बिरोध गर्नेहरु गुरु हुन् उनीहरुले तपाईंलाई सँच्चिन खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । किनकी तपाईंहरु सँच्चिन पनि त जरुरी हुन सक्छ । जानेर कुनै भुल नगर्नुहोस्, कुनै पनि गल्तिलाई ढाकछोप नगर्नुहोस्, आफ्नै मानिस भए पनि भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्नुहोस र भ्रष्टाचार शुन्य राष्ट्र बनाउन महाअभियान सुरु गर्नुहोस् पहिला आफ्नै टिमबाट अपरेसन सुरु गर्दा कसो होला ?
काठमाडौंका ३० भन्दा बढी सार्वजनिक स्थानमा सुझाव संकलन बक्स राख्नुहोस् र जनतालाई भन्नुहोस् कि तपार्इंका चासोहरु त्यहाँ बक्समा राख्नुहोस् । ती सुझावहरुलाई विश्लेषण गर्ने र प्राथमिकीकरण गर्ने बिशेषज्ञहरुको टिम बनाउनुहोस् त्यो टिमलाई देशैभर परिचालन गर्नुहोस् । यस्तो सुझाव बक्स सातै प्रदेशमा राख्नुहोस् र त्यहाँ पनि त्यस्तो टिम बनाउनुहोस् । भिजन भएका र साँच्चै राष्ट्रप्रति समर्पित मानिसहरुलाई परिचालन गर्नुहोस् ।
तपाईं दुई जना एकापसमा मिलेर पार्टीका अन्य नेताहरुको इतिहास र योगदानलाई कदर गर्दै सबैलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहोस् गुटलाई बिर्सनुहोस र चुस्त टिम बनाउनुहोस् । हरेक पार्टी सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् उनीहरुलाई उत्पादनमूलक काममा व्यस्त तुल्याउनुहोस् ।
मासिक रुपमा सुझाव संकलनको लागि मिडियाका सम्पादकहरुको भेला बालुवाटारमा बोलाउनुहोस्, कसरी देशलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुहोस् । किनकी भिजन सबै सँग हुन्छ । कतिको भिजन बालुवाटारसम्म पुग्ने मेकानिजम नै छैन । आम मानिसका भिजन बालुवाटार सम्म पुग्न सक्ने सहज उपाय गर्नुहोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा तपार्इं दुवै जना एक ठाउँमा आएर मात्र पार्टी र सरकारको धारणा बनाउनुहोस् किनकी दुई अध्यक्षले उल्टा–सुल्टा कुरा गर्दा जनतामा निराशा छाउँछ र आक्रोश पैदा हुन्छ अनि समर्थकहरु नै आक्रमणमा उत्रन सक्छन् , यसलाई ख्याल गर्नुहोस् ।
कुन–कुन क्षेत्रमा सरकारलाई असफल पार्ने गरी ग्रुप तयार गरिएको छ, त्यो पत्ता लगाउनुहोस्, त्यो ग्रुपको रणनीति के हो ? त्यो पत्ता लगाउनुहोस् । त्यसलाई समाप्त पार्ने काउन्टर रणनीति त होइन तर तटस्थ पार्ने नीति ल्याउनुहोस । निर्ममता होइन, कोमलतालाई प्रशय दिनुहोस् ।
कम्तिमा स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्दै गरेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुसँग देश बनाउने भिजनबारे हरेक ३–३ महिनामा विश्वविद्यालयमै गएर छलफल गर्ने र सुझाव संकलन गर्ने पद्धति बसाल्नुहोस् । विश्वविद्यालयलाई कम आँक्ने काम नगर्नुहोस् । उनीहरु ज्ञान उत्पादन गर्ने पबित्र थलो हुन् । विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको लागि बजेट दिनुहोस् र समाजमा लुकेका प्रतिभाहरुलाई अनुसन्धानमा ल्याउने नीति बनाउनुहोस् । उक्त अनुसन्धानमा काम गर्नको लागि सबै क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुहोस् । किनकी प्राविधिक कारणबस अनुसन्धानकर्ताहरु विश्वविद्यालय बाहिर पनि हुन सक्छन्न्
प्राध्यापकहरु, सह–प्राध्यापकहरु र उप–प्राध्यापकहरुको छुट्टा–छुटै भेला गर्नुहोस् र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर सुझावहरु नियमित रुपमा लिने काम गर्नुहोस् । आफुले नियुक्त गरेका मानिसहरुको मात्र सल्लाह लिँदा त्यो अपूर्ण हुन सक्छ । आफ्ना नागरिकलाई विश्वास गर्नुहोस् । बौद्धिक व्यक्तिहरु शिक्षा जगतमै हुन्छन् सामान्यतया, यसलाई ध्यान दिनुहोस् ।
देश बनाउन राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ र शिक्षाविदबीच सहकार्यको ‘मोडेल’ तयार गर्नुहोस् । किनकी यहाँ यी तीन क्षेत्रका नागरिकबीचको सहकार्यमा खडेरी छ । आधारभूत क्षेत्रमा जनताको अभाव र आवश्यकता पुर्ती गर्ने गरी नवीन कार्यक्रम ल्याउनुहोस् । ठूला–ठूला सपना पनि चाहिन्छ र ती प्रशंसनीय पनि छन् । तर, त्यो सुन्दर भविष्यको लागि काम लाग्छन् अहिलेको लागि जनताको तत्कालिन आवश्यकताहरु अलि प्रधान हुन् ।
थप चार वर्षभित्र आपसी मनमुटावबाट पार्टीलाई अस्त–व्यस्त पार्ने होइन कि थप मजबुत पार्दै, जनता र देशको काँचुली फेर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुहोस् । नत्र थाहा होला नि, एउटा समाप्त हँुदा सबै समाप्त हुनेछ । आफू सकिने र देशलाई सकाउने बाटो नरोज्नुहोला । अनि हेरौं परिणाम कस्तो आउँछ ।
–हरि चन्द त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति’अन्तर्गत विद्यावारिधी अध्ययनरत छन् ।
Tagsअपिल हरि चन्द